‘हाइड्रोपोनिक’ प्रविधिबाट तरकारी खेती र माछापालन – yuwa Awaj
मंगलबार , साउन १२, २०७८
असार ६, २०७८ आइतबार 129
बाग्लुङ । तलपट्टि सानो पोखरीमा माछा, माथि तरकारी बाली । खेती गर्न न माटो चाहिने न मल । त्यही पोखरीको पानीले तरकारी सिञ्चित गर्छ फेरि तल खस्छ । विद्युतीय प्रणालीमार्फत यो चक्र पूरा हुन्छ ।
बागलुङ नगरपालिका–३ रात्माटाका अगुवा किसान बैकुण्ठ सापकोटाले यसरी नै ‘हाइड्रोपोनिक’ प्रविधिबाट तरकारी खेती र माछापालन गरिरहेका छन् । सापकोटाले गाउँमा पहिलोपटक यो आधुनिक प्रविधिको सफल परीक्षण गरेका हुन् ।
उहाँका अनुसार यसलाई ‘माटोविहीन’ खेती पनि भनिन्छ । बिरुवालाई चाहिने सूक्ष्म खाद्यतत्व पानीका माध्यमबाट दिइन्छ । पोखरीको पानीलाई विद्युतीय मोटरमार्फत तानेर बाली लगाइएको ठाउँमा पुर्याइन्छ । सापकोटाले चार मिटर लामो र साढे दुई मिटर
चौडाइसहितको संरचनामा माछापालन र तरकारी खेती गरेको बताउनुभयो । “यो नमूना परीक्षण जस्तो पनि हो, सम्भवतः जिल्लामै यो प्रविधिबाट खेती गरिएको पहिलोपटक हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पोखरीमा तीन सय माउर माछाका भुरा हुर्किरहेका छन् भने माथिपट्टि प्याज । ‘हाइड्रोपोनिक’ प्रविधिबाट सानो जरा हुने तरकारी बाली मात्र लगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ।
प्याज, लसुन, धनियाँ, साग जस्ता तरकारी खेती त्यसमा फस्टाउँछ । सापकोटाले तरकारीका बाली लगाउन बाँस, प्लाष्टिक बोतल र गिलास प्रयोग गरेका छन् । “पोखरीको पानी मोटरले माथि तान्छ,
त्यही पानी एकबाट अर्को हुँदै सबै बोतलमा पुग्छ र फेरि पोखरीमा खस्छ”, उहाँले भन्नुभयो। हरेक बोतलको बीचमा प्वाल पारेर त्यसमा प्लाष्टिकको गिलास राखी त्यसमै तरकारीको बिरुवा लगाउने गरिएको उनको भनाइ छ ।
बिरुवा लगाउँदा माटाको खाँचो पर्दैन । आफूलाई चाहिने खाद्यतत्व र पोषण बिरुवाले पानीबाटै लिन्छ । माछाको दिसाले गर्दा पोखरीको पानीमा सूक्ष्म खाद्यतत्व हुने सापकोटाले बताउनुभयो।माछापालन नगरी तरकारी मात्रै लगाउँदा भने पानीमा
बिरुवालाई चाहिने खाद्यतत्व मिसाउनुपर्ने हुन्छ । उहाँले बताउनुभयो, माछापालन पनि गरेको भएर दुई÷तीन हप्तामा पोखरीको पानी फेर्दै आएका छन् । तरकारी मात्रै हुँदा त्यो झन्झट पनि हुँदैन ।
धेरै परिश्रम गर्न पनि नपर्ने र थोरै ठाउँ भए पनि हुने भएकाले पछिल्लो समय यस प्रविधिप्रति किसान आकर्षित हुन थालेका छन् । घरका छत र कौसीमा पनि यो खेती गर्न सकिन्छ ।
माटोमा भन्दा यस प्रविधिबाट गरिएको खेती छिटो र धेरै उब्जाउ हुने कृषि प्राविधिक बताउँछन् । ‘हाइड्रोपोनिक’ प्रविधि अपनाउँदा माटोजन्य रोगको पनि खतरा हुँदैन ।
विषादी र रसायनिक मल प्रयोग नभएका कारणले किसानले फलाउने तरकारी जैविक हुन्छ । उनी ‘हाइड्रोपोनिक’ प्रविधिबाट तरकारी खेतीको व्यावसायिक विस्तार गर्ने सोचमा रहेका छन् । माछापालन र तरकारी खेती दुवै गर्न सकिने भएकाले यसप्रति अन्य किसान पनि आकर्षित हुने देखिन्छ ।
व्यवसायी सापकोटाले माछा पालनका लागि नगरपालिकाबाट रु आठ हजार अनुदानसमेत पाएको बताउनुभयो । उनी विगत केही वर्षदेखि ‘सापकोटा कृषि फार्म’मार्फत व्यावसायिक पन्छी पालन र तरकारी खेतीमा सक्रिय रहेका छन् ।
फार्ममा आठ कुखुरा र दुई चरा प्रजातिका गरी दश थरी पन्छी छन् । दुईवटा ‘टनेल’मा तरकारी छ । कृषिमा श्रम–पसिना बगाउन नहिच्किचाउने उनी घरमै बसीबसी मनग्य कमाइ गर्छन् ।
Prevकाठमाडौं उपत्यकामा फेरि एक साता थपियो निषेधाज्ञा, जोर-बिजोर लागू गरेर निजी सवारी चल्न दिइने
Nextभोलिदेखि टुटल र पठाओ सेवा पनि सञ्चालन
एएफसी महिला एसियन कप भारतको मुम्बई र पुणेमा हुने
क्यान्सर रोगको औषधि उत्पादन अब नेपालमै
पर्सामा गुञ्जियो राजा आउँ देश बचाउँको नारा…हेर्नुहोस् ।
डा. डिला संग्रौलाको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न- कतिसम्म संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत काढ्ने हो ?
के पूर्वपतिलाई देखाउनै खुसी मनाइरहेकी छिन् प्रियंका ? (1873)
आज कहाँकहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ? सतर्क रहन आग्रह (1812)
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1609)
सलमान खानकी पत्नी र छोरी दुबईमा ? दिए यस्तो उत्तर (1461)
को’रोना सं’क्रमणको तेस्रो लहर ? (1029)
क–कसले अस्वीकार गरे मन्त्री बन्ने देउवाको प्रस्ताव ? (918)
किन बारम्बार स’ताउँछ सिन्धुपाल्चोकलाई पहिरोको प्रकोपले? (883)
बच्चालाई तोरीको तेलले फाइदा गर्दैन भनेर हामीले क्रिम त दलिरहेका छैनौं? (873)
सबै नागरिकलाई को’रोना वि’रुद्धको खोप
आज नेप्से ८.२४ अंकले ओरालो लाग्यो
नेपालगन्ज र कोहलपुरका सौर्य बत्ती बल्न छाडे
झापाको गौरादह नगरपालिका एक हप्ता लकडाउन
तेस्रो भेरियन्टको को’रोना रोकथामको तयारीमा प्रदेश सरकार
१.	के पूर्वपतिलाई देखाउनै खुसी मनाइरहेकी छिन् प्रियंका ? (1873)
२.	सलमान खानकी पत्नी र छोरी दुबईमा ? दिए यस्तो उत्तर (1461)
३.	को’रोना सं’क्रमणको तेस्रो लहर ? (1029)
४.	देशभरको मौसम बदली, कहाँ-कहाँ हुँदैछ आज भारी वर्षा ? (623)
५.	अमेरिकाले नेपाललाई दिने खोप कति र कसरी आउँछ ? (581)
६.	देउवा सरकारलाई १८ महिनाअघि हटाउन सकिन्छ? (482)
७.	मिथक : भगवान् विष्णु र लक्ष्मी ४ महिनासम्म सुत्ने ‘क्षीर सागर’ कहाँ पर्छ ? (421)
८.	ओली निवासमा विप्लव समूहका नेताहरू, के भयाे छलफल ? (420)